Famerana valves -
Valizy mifehy - MODELY 106/206-PR VALVE
Ny tsindry hampihena ny tsindry dia mety amin'ny fitazonana ny tsindry mety ambany ao ambanin'ilay lozy io. Ny valala dia mamaly ny tsindry ambany sy ny fifandraisana amin'ny fantsom-pivoarana ary rafitra mpanamory izay mamaly ny fiovana kely amin'ny tsindry ary manitsy ny toeran'ny valve amin'ny alàlan'ny fanovana ny tsindry etsy ambony diaphragma.
Mihazona tsindry marina eo ambanin'ilay valva
Tonga dia haingana izy ireo
Valizy mifehy - MODELY 106/206-PR-48 valva fanodinana miaraka amin'ireo mpandalo onja kely
Ny tsindry mihena hampihenana ny fantsom-pandehanana kely dia ny tsindry mihetsika mivantana amin'ny fampihenana ny valve miaraka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alalàn'ny habakabaka. Eo ambany fihenan-drivotra ambany dia mikatona ny lalantsara ary mijanona misokatra ihany koa, mifehy ny tsindry hidina mankany amin'ny zotra tsy miteraka fihozongozona.
Izy io dia mijanona amin'ny fikorianan-javatra tsy mihetsika mankany aotra
Fametahana tsindry azo antoka sy azo antoka
Tonga lafatra ho an'ny fametrahana slope avo